"Ngoku kwaye emva koko" iya kuba luthotho lokuqala oluvela kwinkampani yemveliso yaseSpain yeApple TV + | Ndisuka mac
Siyaqhubeka nokuthetha ngeendaba eziza kufika kwiinyanga ezizayo kwinkonzo ye-Apple yokusasaza ividiyo ngothotho Ngoku nangoko, uthotho lweelwimi ezimbini ngeSpanish nangesiNgesi Apho u-Apple ufumene amalungelo ngokwamakhwenkwe e Umhla wokugqibela.
Olu luhlu lutsha lwenziwe nguRamón Campos, uGema R.Niera noTeresa Fernández-Valdés, eli qela linye esinokuthi silifumane ngasemva kuthotho lweSpanish olufana IVelvet, iGrand Hotel y Amantombazana eentambo. Kumsebenzi wokuvelisa ukhona Inkampani yokuvelisa yaseSpain iBambú Producciones.
Njengoko sinokufunda kuMhla wokugqibela:
Hlala eMiami kunye nabadlali beSpanish ngokupheleleyo, Ngoku nangoko iphonononga umahluko phakathi kweminqweno yolutsha kunye nenyani yokuba ngumntu omdala, xa ubomi beqela labahlobo abasenyongweni abasuka ekholejini butshintsha ngonaphakade emva kwempelaveki yombhiyozo iphela ngokufa omnye wabo. Ngoku, kwiminyaka engama-20 kamva, abahlanu abaseleyo baphinde bahlangana ngokudolophana ngenxa yesoyikiso ebeka umhlaba wabo obonakala ugqibelele emngciphekweni.
Olu papasho lunye, luthi uGiden Raff, uzakuba noxanduva lokulawula iziqendu ezibini zokuqala ukongeza ekwenzeni umsebenzi wokuba ngumvelisi olawulayo wolu ngcelele. Iskripthi esenziwe nguRamón Campos kunye noGema R. Niera, ngelixa bekusenziwa umboniso weqonga nguRamón Campós noTeresa Fernández-Valdés, abanini benkampani yemveliso.
Njengesiqhelo, ngalo mzuzu akwaziwa ukuba olu chungechunge lutsha lucwangciselwe ntoni ukuba luboniswe, uthotho oludibeneyo EAcapulco, enye imveliso ethi se baya kudubula ngeSpanish nangesiNgesi kwiApple TV +.
I-Acapulco, yinto ehlekisayo apho sifumana khona Umlingisi waseMexico u-Eugenio Derfez zombini kwimveliso nakwimidlalo yeqonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » "Ngoku kwaye emva koko" iya kuba luthotho lokuqala lwenkampani yemveliso yaseSpain yeApple TV +